ZOMA 31/21/2021 - Andro faha-7 amin'ny Havaloan'ny Noely (Taona D) - Joany 1,1-18. | FKMP
ZOMA 31/21/2021 – Andro faha-7 amin’ny Havaloan’ny Noely (Taona D) – Joany 1,1-18.
« Tamin’ny voalohany ny Teny, ary ny Teny, dia tao amin’Andriamanitra, ary Andriamanitra ny Teny. Tao amin’Andriamanitra tamin’ny voalohany Izy. Izy no nahariana ny zavatra rehetra, ary raha tsy Izy, tsy nisy àry ny zavatra àry rehetra. Tao aminy ny fiainana, ary ny fiainana no fahazavan’ny olona. Ary mamirapiratra amin’ny maizina ny fahazavana, fa tsy nandray azy ny maizina.
Nisy lehilahy anankiray nirahin’Andriamanitra, Joany no anarany; tonga ho vavolombelona hanambara ny Fahazavana izy, mba hinoan’ny olona rehetra noho ny teniny. Tsy izy anefa no Fahazavana fa tonga ho vavolombelona manambara ny fahazavana fotsiny izy. Fa ny Teny ihany no tena Fahazavana, izay manazava ny olona rehetra tonga amin’izao tontolo izao. Teo amin’izao tontolo izao Izy, ary Izy no nahariana izao tontolo izao, nefa tsy nahalala Azy izao tontolo izao. Tonga tao amin’ny olony Izy, fa ny olony tsy nandray Azy. Fa izay rehetra nandray Azy, dia nomeny ny fahazoana ho tonga zanak’Andriamanitra, dia izay mino ny Anarany, ka tsy mba nateraky ny ra, na ny sitra-pon’ny nofo, na ny sitra-pon’ny olona ireo, fa naterak’Andriamanitra. Ary ny Teny dia tonga nofo, ka nonina tatý amintsika; ary nibanjina ny voninahiny izahay, dia voninahitra tahaka izay zakain-Janaka Lahitokana avy amin’ny Rainy, sady feno fahasoavana sy fahamarinana Izy. Nanambara Azy i Joany ka niantso nanao hoe: “Izy ilay nolazaiko hoe: Izay avy ao aoriako dia efa tonga eo alohako, satria talohako Izy.” Ary avy amin’ny hafenoany no nandraisantsika rehetra fahasoavana miampy fahasoavana, satria ny Lalàna moa nomena tamin’ny alalan’i Môizy fa ny fahasoavana sy ny fahamasinana kosa dia avy amin’ny alalan’i Jesoa Kristy. Tsy dia nisy nahita an’Andriamanitra na oviana na oviana; fa ny Zanaka tokana izay ao anatin’ny Ray ihany no hany nanambara Azy. »
“Ary ny teny dia tonga nofo”… tena marina sy tanteraka avokoa ireo izay volazan’ny mpaminanyrehetra. Satria lehibe loatra ilay Andriamnitsika ary feno fitiavana antsika izy ka izay rehetra nolazainy sy nampanantenainy dia tena tanteraka avokoa. “Nomeny ny zanany lahitokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandraikizay”. Koa mino sy matoky tanteraka ny fampanantenanao izahay, Ray ô, ka izay rehetra mino anao, dia tsy ho faty fa hanana ny fiainana mandrakizay.
Misaotra indrindra tamin’iny taona 2021 nomenao anay iny ary mankasitraka sahady amin’ny taona vaovao izay mbola omenao anay olombelona noharianao.
Mirary faran’ny taona mahafinaritra ho antsika rehetra. Samy ho tratry ny rahampitso aby ooo.
Previous Post: ALAKAMISY 30/12/2021 – Andro faha-6 amin’ny Havaloan’ny Noely – Lk 2, 36-40
Next Post: ALATSINAINY 03/01/2021 – Andro voalohany aorian’i Epifania (Taona D) – Mt 4,12-17.23-25